News Archives - Page 27 of 41 - Popular
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတာ နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော်ကြာခဲ့တဲ့ စာပေညီလာခံကြီးကို လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ စည်စည်ကားကား၊ သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက်နဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ စတင်မယ့် စာပေညီလာခံ ၂ဝ၁၇ နဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ကြမယ့် စာပေလောကသားတချို့ရဲ့…
စာရေးဆရာတွေက ချမ်းသာတာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ အသင်း ၁ဝ ဖွဲ့ စုစည်းမိပြီ။ ညီလာခံကြီးလုပ်ဖို့လည်း ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုလို့ရှိ ရင် ပွဲလုပ်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကုန်လာမယ်။ ဒီကုန်ကျငွေတွေကို ဘယ်လိုရှာကြမလဲပေါ့။ အမျိုးမျိုး စဉ်းစားကြတာပေါ့။ ပြဇာတ်ကမလား၊ စာအုပ်ထုတ်မလား၊ သီချင်းဆိုကြမလားဆိုတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း…
KIRA KIRA Japan ခရီးသွားအစီအစဉ်ကို ဇန်နဝါရီ ၆ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားတော့မည်
မိုးစက်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတိုးတက်လာတာတဲ့အမျှ ဆက်ပြီးဒါတွေကို ဖြစ်စေချင်တယ်။ တချို့ဆိုရင် နိုင်ငံအရမ်းတိုးတက်တဲ့အခါမှာ ယဉ်ကျေး မှုပျောက်သွားတယ်။ Traditional အစားအစာတွေ လျော့နည်းသွားတယ်။ ဒါမျိုး မိုးစက်အနေနဲ့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံလိုပဲ နှစ်ခုလုံးတည်ရှိနေစေချင်တယ် . . .
ဂျပန်စစ်ပြန်ကြီး မစ္စတာမစ်ဆူမီဆာကာဂူချီသည် ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ တွင် ကချင်ပြည်နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသို့ ပထမအရစ်အလှူငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝဝ နှင့် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအရစ်…
မုံရွာမြို့တွင် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးများအတွက် ပရဟိတ အလှမယ် ရွေးပွဲကို ၂ဝ၁၈ခုဇန်နဝါရီလအတွင်း မုံရွာမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ရာ လျောက်လွှာများကို နိုဝင်ဘာလက စတင်လျောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း . . .
''မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များလာတဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကို ကာ ကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ကလေးတိုင်းကို တိုးပေးဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ မိဘတွေကလည်း ကလေးတိုင်းကို မလွတ်အောင် ထိုးသင့်ပါတယ်။ နာဂဒေသက မြို့တွေပေါ်မှာတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်မှာ ထိုးပေးမှာဖြစ်ပြီး မြို့နဲ့ဝေးတဲ့ရွာတွေမှာတော့ . . .
ကျွန်တော်တို့က တွဲလာတာလည်း ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ဘက် မိဘတွေ၊ ဆရာသမားတွေ၊ အနုပညာနယ်ပယ်က ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေနဲ့ ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကို တရားဝင် အသိပေး စေ့စပ်တဲ့ပွဲလေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တွဲလာတဲ့အချိန်တွေ ကြာတာနဲ့အမျှ အချစ်ဆိုတာထက် သံယောဇဉ်က ပိုလာပါတယ်…
''မုန်တိုင်ရွာ ရှေးဟောင်းနယ်မြေက ပြည်လုံးချမ်းသာစေတီကို လွန်ခဲ့တဲ့(၁၉)နှစ်က ထီးတော်တင် ကုသိုလ်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ခုတစ်ခါ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်မှာ . . .